Jobber weputara akowaputa ihe omuma a nke ndi ahia ugbua nke ulo oru ha n’etiti COVID-19
TORONTO- (Azụmahịa WERE) –Jobber, onye na-eweta ngwanrọ na-ahụ maka njikwa ọrụ ụlọ, kwupụtara nchoputa sitere na akụkọ ọhụrụ ya lekwasịrị anya na mmetụta akụ na ụba COVID-19 na ngalaba Homelọ Ọrụ. N'itinye data nke Jobber zukọtara site na ndị ọkachamara ọrụ ụlọ 90,000+ n'ofe ụlọ ọrụ 50+, Nchịkọta Ọrụ Ntanetị :lọ: COVID-19 na-enyocha otú otu dị n'ozuzu ya, yana akụkụ ndị dị mkpa n'ime Ọrụ includinglọ gụnyere nhicha, Nkwekọrịta, na Green, emeela. site na mmalite nke afọ ruo na Mee 10, 2020.
Enwere ike ịchọta akụkọ ahụ na saịtị Jobber nke ewepụtara ọhụụ, nke na-enye data na nghọta banyere ahụike nke ngalaba Ọrụ ụlọ. A na-emelite saịtị ahụ kwa ọnwa site na iji data ọhụrụ, yana kwa ụzọ n'ụzọ anọ maka akụkọ akụ na ụba enwere ike ibudata.
Sam Pillar, onye isi ala na onye rụpụtara Jobber kwuru, "Afọ a agbariela nke ukwuu. Agbanyeghị na ụdị ndị ahụ emetụtaghị ndị ọzọ, dịka ụlọ ahịa Akwa na Restaurantslọ oriri na ọ Restaurantsụ ,ụ, ọ ka nwere ọnụọgụ 30% na ntanetị ego, nke bụ ọdịiche dị na ịbịanye ụgwọ, ịkwụ ụgwọ mbinye ego, ma ọ bụ ịzụ otu ngwa ọhụrụ. . ”
"Anyị mepụtara Akụkọ Ntanetị Ọrụ Ego :lọ: Mpempe akwụkwọ COVID-19 na ebe a na-arụ ọrụ maka ịnye data, nghọta, na idozi anya na ndị mgbasa ozi, ndị nyocha, na ndị ọrụ ụlọ ọrụ kwesịrị inyere ha aka ịghọta nnukwu ọrụ ngwa ngwa Gọọmentị Home. , ”Ka ọ gara n'ihu.
Agbanyeghị na akụkọ ahụ na-ekpughe na Homelọ Ọrụ enwetala ego na-akpata na March na Eprel, ndị gosipụtara mmalite na May, dịka ọrụ ọhụụ edobere, na-egosi ihe ịrịba ama na ụlọ ọrụ ahụ amalitela. Nkwupụta ahụ tụlere otu ụdị ọrụ ụlọ ahụ si rụọ ma e jiri ya tụnyere US GDP n'ime afọ ole na ole gara aga, yana otu ụdị ahụ si nwee mmerụ ahụ n'oge a na-adịbeghị anya ma e jiri ya tụnyere ndị ọzọ dị ka ụlọ ahịa General, Autlọ ahịa, na Grolọ Ahịa.
Abheek Dhawan, VP, Opelọ Ọrụ Azụmaahịa na Jobber kwuru, "Enwere ọtụtụ data na ozi dị na ya, mana ọ dị obere obere. Nkwupụta a na-eme ka a mata ịdị ngwa na mbelata nke ọdịda ahụ, yana usoro na-adịbeghị anya maka mgbake nke onye ọ bụla metụtara otu ahụ nwere ike ịtụ anya ya. "
Na mgbakwunye na data mkpokọta mkpokọta, nchọpụta ndị a na-enweta n'ime akụkọ ahụ na-agbajikwa ụzọ atọ maka Ọrụ Ọrụ :lọ: Nhicha, mejupụtara ụlọ ọrụ dị ka ụlọ obibi na nhicha ahịa, nhicha windo, na ịsacha nrụgide; Green, mebere nlekọta ahịhịa, ịsa ahịhịa, na ọrụ ndị ọzọ dị n'èzí; na Nkwekọrịta, nke nwere azụmahịa dị ka HVAC, ihe owuwu, eletriki, na igwe.
Iji tulee ma ọ bụ budata mkpesa Na-ahụ Maka Ọnọdụ akụ na ụba nke Home Service: COVID-19 Edition, gaa na ebe nrụọrụ Ọrụ Ọrụ Ego Economic Trends ebe a: https://getjobber.com/home-service-reports/
Jobber (@GetJobber) bụ ntinye n'ọrụ na-emeri n'ọsọ na njikwa arụmọrụ maka azụmaahịa ụlọ. N'adịghị ka akwụkwọ mgbasa ma ọ bụ mkpịsị akwụkwọ na mpempe akwụkwọ, Jobber na-edekọ ihe niile n'otu ebe ma na-arụ ọrụ kwa ụbọchị, yabụ, obere azụmahịa nwere ike ịnye ọrụ 5 kpakpando n'ọtụtụ. Kemgbe mmalite na 2011, azụmahịa na-eji Jobber enyerela ihe karịrị nde mmadụ 10 aka n'ihe karịrị mba iri anọ na anọ, na-ebugara ihe karịrị ijeri $ 6 kwa afọ, ma na-eto, na ọrụ ndị ahịa ha. Na 2019, ụlọ ọrụ ahụ ghọtara dị ka ụlọ ọrụ ngwanrọ nke abụọ na-eto ngwa ngwa na Canada site na Canadian Business 'Growth 500, yana onye mmeri nke mmemme Technology Fast 500 ™ na Technology Fast 50 ™ nke Deloitte gosipụtara. N'oge na-adịbeghị anya, aha ụlọ ọrụ ahụ ka ọ bụrụ ndepụta ụlọ ọrụ Companylọ Ọrụ Kachasị Eke Ọsọ 2020.
Sean Welch PAN Nkwukọrịta maka Jobber Jobber@pancomm.com +1 407-754-6866 Elana Ziluk Onye Mmekọrịta Ọhaneze, Jobber Elana.z@getjobber.com +1 416-317-2633